Munaasabad maanta ka socota Garoonka Banadir Stadium Maxaa lagu soo bandhigi doonaa? » Laacib.so | Horyaalka Ciyaaraha Dalka iyo Caalamka
Home/ Africa/Munaasabad maanta ka socota Garoonka Banadir Stadium Maxaa lagu soo bandhigi doonaa?
Munaasabad maanta ka socota Garoonka Banadir Stadium Maxaa lagu soo bandhigi doonaa?
Laacibka Soomaaliya April 6, 2017
Laacib.so : Maanta oo Khamiis ah waxaa Garoonka Banadir Stadium maalmahaan oo dhan ay ka socotay diyaarinta munaasabad si cajiib ah loo diyaariyay ayaa maanta ka socota waxaana dadweynaha loo sheegay in si bilaash ah ay uga soo qeyb gali karaan oo ay tahay lacag la’aan waxaana munaasabaddaani lagu maamuusayo maalinta Horumarinta Nabadda iyo Ciyaartoyda Soomaaliyeed.
Munaasabaddaan oo ay ka dhaceeyso garoonka Banadir Waxaa lagu soo bandhigi rabaa fanaaniinta cusub iyo kuwii hore oo ka qeyb ah munaasabaddaani waxaana ka mid ah fanaaniinta ka qeyb qaadanayo labada fanaan ee da’da yar Dayax Dalnuurshe iyo Maxamed bashiir oo ah fanaaniinta sanadkaan dhallintu ay dhageeysato,Labadaan fanaan oo ka mid ah kuwa ugu shacbiaydan badan dalka ayaa lagu wadaa in ay garoon ka Banaadir kusoo bandhigaan heeso ka turjumadya nabadda iyo Ciyaaraha.
Waxaa ka soo qeyb galayo mas’uuliyiin dhanka ciyaaraha ah iyo ciayartooydii cuslaatay ee soomaaliyeed waagii berisamaadkii ciyaari jiray kubadda cagta Soomaalya iyo Marti Sharaf kale oo ka qeyb ah munaasabaddaan.
Munaasabadda ayaa bilaaban doonta Abaaraha 2:00 Duhurnimo illaa Maqrib laga gaarayo waxaana dadweynaha ay isha ku haayaan bandhigaan cusub iyo sida uu noqon doono waxqabadka sanadkaan.
Liverpool Oo Ugu Dambeyn Go’aan Ka Gaari Doonta Mane,Sabab?
Falanqeyn: kulankii Barcelona ay 3-0 uga badisay Naadiga Sevilla +SAWIRRO